Mogadishu Journal » 2019 » July » 23
Wasiir Cawad oo ka hadlay mowqifka dowladda Federaalka ee warbixinta lagu daabacay New York Times
Mjounal :-Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay dowladda Soomaaliya inay ku qanacday sida ay dowladda Qatar isaga fogeysay warbixin lagu baahiyay wargeyska ka soo baxa Marekanka ee New York Times . Cawad oo wareysi...
Mjournal :-Boris Johnson ayaa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Conservative ee dalka UK isagoo noqonayaa ra’iisul wasaaraha cusub ee dalkaas. Johnson oo hore u soo noqday duqa London ayaa ka guuleystey wasiirka arrimaha dibadda Britain jeremy Hunt. Waxana lagu wadaa in berri oo...
Koox caan ah oo lacago badan ku dooneysa Neymar
Kooxda Kubadda Cagta ee Real Madrid ayaa dalab gaaraya 90 milyan euro oo uu la socdo Gareth Bale ka gudbisay Ciyaaryahanka Caanka ah ee reer Brazil ee Paris Saint-Germain Neymar. Xiddiga reer Brazil ayaa si xoogan loola xiriirinayay xagaagan inuu ku laabanayo Barcelona iyadoo...
Somali forces arrest 3 al-Shabab militants in southern town
Somali forces have apprehended three al-Shabab militants in a security operation conducted on Sunday in Kismayo town, southern Somalia, an official said on Monday. Somali National Army (SNA)’s Division 11th commander Mohamed Hassan Badal said the arrests were made after the...
Turkiga oo sheegay in uu garab-taaganyahay Soomaaliya kaddib weerarkii shalay
Mjournal :-Dowladda Turkiga ayaa si adag u cambaareysay weerar qarax ah oo galinkii hore ee Isniintii shalay ka dhacay koontaroolka koowaad ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Dad ka badan toban ruux ayaa weerarka oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku...
Foreign envoys laud integration of moderate Islamic group into Somali army
MOGADISHU– Foreign envoys on Monday lauded the ongoing process to integrate forces of moderate Islamic group Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ) into Somali security forces. The envoys from the African Union, the European Union, the Intergovernmental Authority on Development...
Shir Soomaaliland shalay joojisay oo maanta ka furmaya Hargeysa
Mjournal :-Maanta oo Talaado ah ayaa lagu wadaa in gudaha Jaamacadda magaalada Hargeysa uu ka furmo Shir looga hadlayo horumarinta iyo fursadaha horyaala dhalinyarada,shirkaas oo shalay ay Xukuumadda Soomaaliland joojisay. Shirka ayaa sababta ay Soomaaliland u joojisay ay aheyd...
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka oo gaaray Magalada Baydhabo
Mjournal :-Magalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay waxaa goordhow gaaray wafdi uu hogagaminayo Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Dowladda federaalka Soomaaliya,kuwaas oo ka ambabaxay Magalada Muqdisho. Wafdiga oo ay qeyb ka yihiin Xildhibaano ka tirsan Baartlamaanka Soomaaliya ayaa...
Guddiyo ka kala tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka oo kulan yeeshay
Mjournal :-Kulan wadajir ah ayaa xalay waxaa ay Magaaladda Muqdisho ku yeesheen Gudiyadda joogtadda ah ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya waxaana kulankaasi si wada jir ah u shir Gudoomiyay Guddoomiyaasha Golaha Shacabka iyo kan Aqalka Sare. Sidoo kale madasha waxaa goob joog...
Marwo Caasho Geelle ”Puntland uma baahna in dhaxdeeda khalalaase laga abuuro
Mjournal :-Marwa Caasha Geelle Diiriye oo Warbaahinta kula hadasahay Magalada Gaalkacyo ayaa waxaa ay ka hadashay Xubnaha guddiga dhismaha wadada Boosaaso ee la xiray & xariga ay sheegtay in lala damacsan yahay. Waxaa ay Madaxda Maamulka Puntland ka dalbatay Marwa Caasha...